I-tvOS 11.2 beta 1 ngoku iyafumaneka kubasebenzisi be-beta yoluntu | Ndisuka mac
I-tvOS 11.2 beta 1 ngoku iyafumaneka kubasebenzisi be-beta yoluntu
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo, abafana baseCupertino basungula i-beta yokuqala ye-tvOS 11.2, i-beta ehlasela intengiso Kungekudala emva kokukhutshwa kwenguqu yokugqibela ye-tvOS 11.1, Inguqu egxile ikakhulu ekuphuculeni ukusebenza kweApple TV kuba ukuba sithetha ngeendaba ezibalulekileyo asinakubafumana ngeminwe yesandla esinye.
I-beta entsha ye-tvOS 11.2 yabasebenzisi be-beta yoluntu luguqulelo olufanayo olukhutshwe ngu-Apple kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo, kwaye apho isinika amanqaku amatsha agxile ekubeni abaphuhlisi bakwazi ukusebenzisa elona nani likhulu leempawu zale bhokisi ye-Apple iseti ephezulu.
Phakathi yintoni entsha kwi-tvOS 11.2 kubasebenzisi abayinxalenye yenkqubo kawonkewonke ye-beta esiyifumanayo:
Iimpawu ezintsha ezijolise ekuphuculeni ukhuseleko lwenkqubo yokusebenza kunye ne-SDK.
Utshintsho oluzenzekelayo kwinqanaba lesakhelo ngokwendalo kunye ne-rando enamandla xa sidlala umxholo kwi-4k kwimodeli exhaswayo.
Amandla okutshintsha imveliso ye-Apple TV 4k kwi-SDR yezicelo ezifakwe kwi-GPU xa umxholo we-HDR usebenza.
Udidi olungalawulwa lufakiwe kwakhona ekwabelaneni ekhaya, kwimiboniso bhanyabhanya, kumabonwakude nakwiividiyo zasekhaya.
Ukuba uyinxalenye yenkqubo ye-Apple TV kawonkewonkeKuya kufuneka uye kwisixhobo seSetingi kwaye ujonge uhlaziyo ekufuneka sele lukhona ukukhuphela ngokuthe ngqo kwisixhobo. Okwangoku, silindele iApple ukuba iphehlelele i-beta kawonkewonke ehambelanayo ye-MacOS High Sierra 10.13.2, i-beta engafanele kuthabatha ixesha elide ukufikelela kubasebenzisi benkqubo ka-Apple ka-beta kawonke-wonke, kungoko namhlanje kunokwenzeka .
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » I-tvOS 11.2 beta 1 ngoku iyafumaneka kubasebenzisi be-beta yoluntu
Iapile ikhupha i-Safari Technology Preview 43 ngezincedisi
Ifilimu yokukhusela i-trackpad kunye ne-Bar Bar ye-Macbook Pro entsha